क्याप्शन फोन FAQ - Konnekt
क्याप्सन भिडियोफोन FAQ
हाम्रो नियमित पनि हेर्नुहोस् सोधिने प्रश्न
कलिंग योजना विकल्पहरू
मेरो सेवामा के समावेश छ?
के म ल्याण्डलाईन फोन गर्न सक्छु?
के म मोबाइल फोन कल गर्न सक्छु?
के म विदेशी फोनहरु कल गर्न सक्छु?
के म विशेष नम्बरहरू कल गर्न सक्छु जस्तै १ 1800००?
स्काईपमा विश्वभरि कसैसँग असीमित फेस-टु-फेस कलहरू (मोबाइलहरू, ट्याबलेटहरू र कम्प्युटरहरू समावेश गर्दछ)।
एक देशमा ल्यान्डलाइन फोनमा असीमित कलहरू यससँग सहमत छन् Konnekt (र केहि देशहरूमा मोबाइल फोन नम्बरहरूमा असीमित कलहरू पनि)
एक फोन नम्बर, प्रयोगकर्ताको देश / स्थानीय क्षेत्रमा, नियमित फोन कलहरू प्राप्त गर्नका लागि (केही देशहरूमा अनुपलब्ध)
सम्म पहुँच Konnekt IT सहायताका लागि ईमेल, अनलाईन च्याट, फोन वा स्काईप मार्फत
चलिरहेको भिडियोफोन सफ्टवेयर अपडेटहरू
सम्पर्कहरू, ध्वनि र अन्य विकल्पहरूमा रिमोट थप र परिवर्तनहरू
धेरै देशहरूमा, ल्यान्डलाइन फोन नम्बरहरूमा असीमित * कलहरू समावेश छन्
तपाईका सबै सम्पर्कहरूको मोबाइल फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ जुन स्काइप अनुप्रयोग चलिरहेका छन्, जुन उनीहरू डाउनलोड गर्न वा प्रयोग गर्न सक्दछन् कुनै सदस्यता वा कल लागत बिना।
धेरै देशहरूमा, हामी असीमित * कलहरू मोबाइल फोन नम्बरहरूमा थप्न सक्छौं - सोध्नुहोस् Konnekt मूल्य निर्धारण को लागी
अमेरिका र क्यानडा जस्ता केही देशहरूमा, घरेलु मोबाइल फोन नम्बरहरूमा असीमित * कलहरू समावेश छन्
तपाईका सबै विदेशी सम्पर्कहरूको मोबाइल फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ जुन स्काइप अनुप्रयोग चालू छ, २- countries देशहरू बाहेक स्काइप रोक्दछ।
हामी धेरै देशहरूमा ल्यान्डलाइन फोन नम्बरमा असीमित * कलहरू थप्न सक्दछौं - हामीलाई मूल्य निर्धारणको लागि सोध्नुहोस्
हामी धेरै देशहरूमा मोबाइल फोन नम्बरहरूमा असीमित * कलहरू थप्न सक्दछौं - हामीलाई मूल्य निर्धारणको लागि सोध्नुहोस्
हामीसँग 60० भन्दा बढी देशहरूमा ल्यान्डलाइन फोन नम्बरहरू कल गर्नका लागि सदस्यता उपलब्ध छ - मूल्य निर्धारणको लागि हामीलाई सोध्नुहोस्
तपाईं कल गर्न सक्नुहुनेछ फ्रि-कल (टोल-फ्री) नम्बरहरू जस्तै १1800०० नम्बरहरू।
अष्ट्रेलिया १ 13 र १1300०० नम्बर जस्ता प्रीमियम नम्बरहरू केही सरकारी र व्यवसायिक सेवाहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ। कृपया सम्पर्क गर्नुहोस Konnekt हामीले तपाईंको योजनामा ​​प्रीमियम नम्बरहरू समावेश गर्न सक्छौं कि भनेर पत्ता लगाउन। अन्यथा, केवल खोजी गर्नुहोस् (वा संगठनलाई बताउनको लागि सोध्नुहोस्) वैकल्पिक स्थानीय नम्बर जुन तपाईंले कल गर्न सक्नुहुन्छ, वा हाम्रो खोजी गर्नुहोस् १ 13-संख्या विकल्पहरूको सूची। वैकल्पिक रूपमा, उनीहरूलाई तपाईंको डेस्कटप फोनबाट तपाईंको भिडियोफोन वा मोबाइल फोन कल गर्न भन्नुहोस्, र तिनीहरूले तपाईंलाई बोलाउनुभएको नम्बरको नोट बनाउनुहोस्।
के म स्काईप सम्पर्क कल गर्न सक्छु?
तपाईं मोबाइल फोन, ट्याब्लेटहरू र तपाईंको सबै स्थानीय र विदेशी सम्पर्कहरूको कम्प्युटरहरू कल गर्न सक्नुहुनेछ जुन स्काईप अनुप्रयोग छन्
केहि देशहरूमा स्काईपको प्रयोग ब्लक हुन सक्छ वा VPN सेवा चाहिन्छ
प्राथमिकताहरू र सम्पर्कहरू
मलाई के पठाउन आवश्यक छ Konnekt, मेरो भिडियोफोन निजीकृत गर्न?
के मलाई भिडियो कलिंग आवश्यक छ?
के म तपाईंलाई स्काईप नामहरू पठाउन आवश्यक छ?
हामी भोल्युम कसरी सेट गर्छौं?
के मेरो रिंगटोन हुन सक्छ जुन मेरो अन्य फोन भन्दा फरक छ?
कृपया हाम्रो अनलाइन प्राथमिकता फारम प्रयोग गर्नुहोस्। हामी तपाईलाई सोध्छौं:
कल बटन (स्पीड डायलको लागि) का लागि सम्पर्कहरूको नाम (नाम र नम्बरहरू)
आमने सामने कुरा गर्न चाहने साथीहरू र परिवारका लागि भिडियो सम्पर्कहरूको नाम (नाम र ईमेल ठेगानाहरू)
रिingटोन र भोल्यूम, रंग योजना, भाषा र अन्य कुञ्जी विकल्पहरू
होइन। तपाइँ केवल तपाइँको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ Konnekt नियमित फोनको रूपमा, क्याप्शनको साथ।
भिडियो कलिंगका फाइदाहरू:
ओठहरू, अनुहारको भाव, शरीरको भाषा पढ्नुहोस्
तपाईलाई मन पराउनु भएका मानिसहरूलाई हेर्नुहोस्
सा language्केतिक भाषा वा सञ्चार कार्डहरू प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईले चाहानु भएको केहि पनि देखाउनुहोस्
चिकित्सा अध्ययन * देखा पर्‍यो कि भिडियो कलिंग मार्फत अनुहार-अनुहार सामाजिक संलग्नताले डिप्रेसन जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ
स्काईप मार्फत कुराकानी गर्न चाहने सम्पर्कहरूको लागि, हामीसँग उनीहरूसँग स्काईपको साथ शुरू हुन मद्दत गर्न र भिडियोफोनमा जडान गर्न मद्दतको लागि ईमेल निमन्त्रणा छ।
हामीलाई सुनुवाइ गर्ने क्षमताहरूको बारेमा बताउनुहोस्, र कि प्रयोगकर्ताले (विश्वसनिय भएर) श्रवणशक्ति लगाउँदछ वा कोक्लियर इम्प्लान्ट छ। हामी आवश्यक खण्डको अनुमान लगाउँदछौं र यसलाई सहि स्तरमा प्रि-सेट गर्नेछौं।
भोल्युम सजिलैसँग परिवर्तन गर्न सकिन्छ जब भिडियोफोन आइपुग्छ, वा पछि।
त्यहाँ एक वैकल्पिक अन-स्क्रिन भोल्युम नियन्त्रण पनि छ कि प्रयोगकर्ताले कलको बेला वा कलहरू बीच भोल्युम समायोजित गर्न सक्दछ।
रिंगing्ग टोन भोल्युमको लागि छुट्टै सेटिंग्स रहेको छ, त्यसैले तपाईं एकल कोठा अपार्टमेन्टहरूको लागि शान्त आवाजको ध्वनि पाउन सक्नुहुनेछ, र शोर आवाज--शयन कक्षका घरहरूको लागि चर्को स्वर बज्ने आवाज।
हाम्रो प्राथमिकता फारम तपाईं उपलब्ध टोन सुन्न र एक घण्टी टोन छनौंट गर्न अनुमति दिन्छ
1920 को अस्ट्रेलियाई टेलिफोन (हाम्रो मनपर्ने)
अष्ट्रेलियाली म्युट फोन (भित्ता-भेदभाव गर्ने र बेसी, उमेर सम्बन्धी सुनुवाई गुमाउने र श्रवण सहयोग छैन) को लागी
हामी घण्टीको बखत स्क्रीन पनि फ्ल्यास गर्दछौं।
हामीलाई आगमन कोठा सचेत आउँदा अन्य कोठामा बत्तीहरू बन्द गर्ने बारे सोध्नुहोस्!
यो माउन्ट कसरी गरिन्छ?
यसको किकस्ट्यान्डमा बस्नुहोस्। हामी यसलाई सानो पनी एउटा सानो चिपकने बकबक आपूर्ति गर्दछौं।
अधिक सुरक्षाको लागि उपयुक्त मोनिटर स्ट्यान्ड प्रयोग गर्नुहोस्। हाम्रो सिफारिश को लागी सोध्नुहोस्।
कुनै पनि VESA-100 मोनिटर कोष्ठक प्रयोग गरेर वाल-माउन्ट गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् भिडियोफोन सहायक उपकरण.
जडान र सक्रियता
के Konnekt फोन लाइन चाहिन्छ?
यो कसरी इन्टरनेट मा जडान हुन्छ?
के यसले ब्याट्री प्रयोग गर्दछ वा पावरमा जडान गर्दछ?
कुनै फोन लाइन आवश्यक छैन।
यो Konnekt क्याप्शन भिडियो भिडियोलाई मात्र इन्टरनेट जडान चाहिन्छ। यसले स्काईप सबै कलहरूका लागि प्रयोग गर्दछ, कल गर्न र नियमित फोन नम्बरबाट पनि, टेलिफोन नेटवर्कमा स्काईपको ईन्टरफेसको लागि धन्यवाद।
लाभ: तपाईं आफ्नो फोन लाइन एक दोस्रो टेलिफोन को लागी जारी राख्न सक्नुहुनेछ, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने। वा तपाइँ तपाइँको फोन सेवा पूर्ण रूपमा रद्द गर्न सक्नुहुन्छ।
यो वाइफाइ मार्फत वा एक नेटवर्क केबल मार्फत इन्टरनेटमा जडान हुन सक्छ।
यसको मतलब तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
तपाईंको घर इन्टरनेट सेवा
बासिन्दाहरूको लागि केयर होमको इन्टरनेट सेवा
एक मोबाइल (सेलुलर) ईन्टरनेट सेवा
एक निश्चित इन्टरनेट सेवा, जस्तै केबल, अप्टिकल, ADSL वा VDSL
तपाईको रोजगारदाताको कार्यस्थल ईन्टरनेट सेवा
कुनै पनि इन्टरनेट सेवा जुन तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ, यो यथोचित विश्वसनीय छ
Konnekt सुझाव र सल्लाहका साथ मद्दत गर्न सक्छ।
यो कुनै पनि नियमित पावर आउटलेटमा जडान हुन्छ। प्लग र जानुहोस्!
Konnekt प्रयोगको देशको लागि सहि उर्जा कनेक्टरको साथ एक पावर एडाप्टर समावेश गर्दछ।
त्यहाँ कुनै सजिलै चार्जिंग कनेक्टर्स वा चार्ज प्याडहरू छैनन्, र त्यहाँ सपाट, विस्फोट वा लीकमा ब्याट्रीहरू छैनन्।
यदि तपाईं ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ जहाँ बिजुली चल्ती सामान्य छ, हामीलाई अबाधित बिजुली आपूर्तिका बारे (UPS) र मोबाइल इन्टरनेटको बारेमा सोध्नुहोस्।
कसरी कल गर्ने
एक स्पर्श: कल बटन थिच्नुहोस्, वा नम्बर प्रविष्ट गर्न फोन थिच्नुहोस्
प्रतीक्षा: अन्य व्यक्ति स्काइप वा तिनीहरूको फोनमा जवाफ दिन सक्छन्
वाच: यदि उनीहरू स्काईपमा जवाफ दिन्छन्, तपाईं ओठ पनि पढ्न सक्नुहुन्छ
सुन्नुहोस्: तपाईं तिनीहरूलाई सुन्न सक्नुहुन्छ (ठूलो स्वरले)
पढ्नुहोस्: क्याप्शनहरू स्वचालित रूपमा सुरु हुन्छ
समाप्त: कि त तपाईं कल समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ
म कसरी भिडियो कल गर्न सक्छु?
म कसरी फोन नम्बरहरु कल गर्न सक्छु?
के म मोबाइल फोन र विदेशी फोन कल गर्न सक्छु?
के मेरो कल निजी छ?
के म आपतकालिन कल गर्न सक्छु?
Konnekt स्काईप मार्फत सम्पर्क कल गर्न एक कल बटन (स्पीड डायल) कन्फिगर गर्न सक्दछ। तपाई एक अर्कालाई देख्न सक्नुहुनेछ, एक बटनको टचमा!
तपाईको साथी, परिवारको सदस्य वा सहयोगीले स्काईप प्रयोग गर्न सक्दछ व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि मोबाइल फोन, आईप्याड / ट्याब्लेट वा कम्प्युटरमा कुनै कल लागत बिना।
स्काईपले कडा डाटा प्रयोग गर्दछ र ब्याट्री जीवनलाई असर गर्दैन।
तपाई फोन नम्बरहरू कल गर्न सक्नुहुनेछ कल कल बटनहरू (स्पीड डायलहरू) प्रयोग गरेर वा संख्यात्मक कीपैड डायलरबाट।
प्रत्येक कल बटन अनुक्रममा १ देखि numbers नम्बरहरुमा कल गर्न सक्दछ। तपाईंसँग जिम बटन हुन सक्छ जुन स्काईपमा पहिलो पटक जिमलाई कल गर्ने प्रयास गर्दछ, त्यसपछि उसको काम नम्बर, त्यसपछि उसको घर नम्बर कल गर्दछ। तपाईंसँग एक ASSIS बटन हुन सक्छ कि emergency सम्म आपतकालीन सम्पर्कहरू कल गर्दछ। वा तपाईंसँग परिवार बटन छ जुन family परिवारका सदस्यहरूलाई पालोमा कल गर्दछ।
कीप्याड डायलरले तपाईंलाई फोन नम्बरहरू डायल गर्न दिन्छ। केवल नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् र कल बटन थिच्नुहोस्।
सित कुरागर्नु Konnekt वा तपाइँको स्थानीय पुनर्विक्रेता उपलब्ध योजनाहरू / सदस्यताहरूको बारेमा।
तपाईं मोबाइल र विदेशी फोनहरू दुई तरिकामा कल गर्न सक्नुहुनेछ:
स्काइप प्रयोग गर्दै। स्काईप मार्फत तपाईंको सम्पर्क कल गर्न कल बटन सेट अप गर्न सकिन्छ। भिडियो कलले ओठ पढ्ने, सा language्केतिक भाषा, र अनुहारको भाव र शरीरको भाषाको संचार, विशाल संचार बढाउने सक्षम गर्दछ। तपाईंको सम्पर्कलाई केवल स्काईप अनुप्रयोग डाउनलोड र स्थापना गर्न आवश्यक पर्दछ।
नियमित फोन कलको साथ, या त कल बटन थिचेर, वा कीप्याड डायलर प्रयोग गरेर।
सित कुरागर्नु Konnekt तपाईंको देशको लागि योजनाहरू / सदस्यता कल गर्ने बारेमा।
हो। सबै कलहरू निजी हुन्।
सबै कलहरू ईन्टरनेटमा ईन्क्रिप्टेड छन्।
धेरै देशहरूमा, तपाईको फोन नम्बर लुकेको छ (निजी)। त्यसोभए यदि तपाइँले पसल वा सरकारी सेवा कल गर्नुभयो भने, तिनीहरूले तपाइँको नम्बरलाई टेलमार्केटिंग वा हेर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्दैनन्। तिनीहरूले तपाइँलाई तपाइँको नम्बर सोध्नु पर्छ। त्यसोभए तपाईं बेनामी सोधपुछ गर्न सक्नुहुन्छ कुनै डर बिना तपाईंको फोन नम्बर एक धोखाधडी वा टेलमार्केटिंग कम्पनीलाई बेचिन्छ!
अष्ट्रेलिया, बेलायत र अन्य धेरै देशहरूमा, आपतकालीन सेवाहरू नम्बर कल गर्न सक्नुहुन्छ।
या त तपाईं सिधै नम्बर डायल गर्न सक्नुहुनेछ (अष्ट्रेलियामा १०००, बेलायतमा ११२ वा 000)) वा हामी कल बटन सेट अप गर्न सक्दछौं ताकि यो कल गर्न एक मात्र टच हो।
सबै देशहरूमा तपाईसँग ASSIST बटन हुन सक्छ जुन अनुक्रममा Cont संपर्क वा नम्बरहरू डायल गर्दछ।
हामीलाई तपाईंको विश्वसनीय कलरहरूको लागि अटो-उत्तर सेटअप गर्ने बारे सोध्नुहोस्, यदि तपाईं आफ्नो भिडियोफोनमा यसलाई बनाउन सक्नुहुन्न भने।
अन-स्क्रिन कीप्याड डायलर प्रयोग गरेर सजिलै फोन नम्बर डायल गर्नुहोस्
विशाल स्क्रिन बटनहरू: थिच्न सजिलो
प्रविष्ट अंकहरू हेर्नुहोस्: त्रुटिहरू हटाउनुहोस् / सही गर्नुहोस्
कलको बेलामा DTMF * टोनहरू पठाउनुहोस्: "... को लागी १ थिच्नुहोस् ..."
मैले कसरी भिडियो कल प्राप्त गर्ने?
म कसरी नियमित फोन कलहरू प्राप्त गर्दछु?
मेरो फोन नम्बर के हो?
के म मेरो पुरानो ल्याण्डलाइन नम्बर वा मेरो मोबाइल फोन नम्बर प्रयोग गर्न सक्छु?
व्यक्तिले मलाई मोबाईलबाट र विदेशबाट कसरी फोन गर्ने?
के म छुटेका कलहरूलाई भ्वाइसमेलमा फर्काउन सक्छु र तिनीहरूलाई क्याप्शनको साथ पुनःप्राप्त गर्न सक्छु?
मेरो कल गर्नेहरू कहिले काँ X जोड्न कल कल गर्न भनिन्छ?
भिडियो कलहरूले स्काईप सेवा प्रयोग गर्दछ। तपाइँको क्याप्शनिंग भिडियोफोन या त स्काईप अनुप्रयोग चलाइरहेको जो कोहीबाट भिडियो कलहरू प्राप्त गर्न, वा ज्ञात सम्पर्कहरूबाट मात्र कलहरू प्राप्त गर्न सेट अप गर्न सकिन्छ।
जब तपाइँ एक भिडियो कल प्राप्त गर्नुहुन्छ,
क्याप्सन भिडियोफोन बज्नेछ,
स्क्रीन फ्ल्यास हुनेछ
स्क्रीन देखिने छ, पिटरबाट आगमन कल वा कल गर्नेको नम्बर
ठूलो,-इन्च चौडा हरियो ANSWER बटन प्रदर्शित हुनेछ
तपाईंको छनौट अनुसार ठूलो,-इन्च चौडा रातो DECLINE वा हANGंग UP वा END CALL बटन प्रदर्शित हुनेछ।
विश्वसनीय सम्पर्कहरू सेट अप गर्न सकिन्छ स्वचालित रूपमा पछि ,० सेकेन्डमा जवाफ दिन, यदि तपाईंले पतन वा बिमारीको कारण उत्तर दिन सक्नुहुन्न भने।
कलको बखत, तपाईं एक अर्कालाई हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यदि तपाईंको सम्पर्कले उसको क्यामेरा बन्द गर्‍यो भने तपाईंले आफ्नो सम्पर्कको नाम देख्नुहुनेछ।
नियमित फोन कलहरू प्राप्त गरिन्छ जब कसैले तपाईंको क्याप्शनि Vide भिडियो फोन नम्बर कल गर्दछ। तपाईंको क्याप्शनिंग भिडियोफोन सेट अप गर्न सकिन्छ कि त जो तपाईंको नम्बर थाहा छ जो कोहीबाट पनि कलहरू प्राप्त गर्न, वा ज्ञात नम्बरहरू (तपाईंको सम्पर्कहरूको फोन नम्बर) बाट मात्र कलहरू प्राप्त गर्न।
जब तपाईं नियमित फोन कल प्राप्त गर्नुहुन्छ,
क्याप्सन भिडियोफोन बज्नेछ
स्क्रिन देखाउने छ, उदाहरण को लागी, पिटरबाट आगमन कल (यदि कलर ज्ञात सम्पर्क हो) वा अन्यथा १1800555888००XNUMX बाट आगमन कल (कलर पूरा नम्बर)
कलको बखत तपाईंले कलरको नाम देख्नुहुनेछ (यदि नम्बर ज्ञात सम्पर्कमा पर्दछ भने) वा कलरको नम्बर (यो निजी नम्बर नभएसम्म)।
तपाईंको क्याप्शनिंग भिडियोफोनलाई यसको आफ्नै फोन नम्बर तोकिनेछ।
तपाईको फोन नम्बरका लागि हामीलाई मनपर्ने क्षेत्र कोड (वा राज्य वा प्रान्त) बताउन निश्चित गर्नुहोस्, वा केवल हामीलाई तपाईंको अवस्थित नम्बर बताउनुहोस् र हामी क्षेत्र कोड मिलाउन प्रयास गर्नेछौं।
तपाईंको क्याप्शन भिडियो भिडियोले नयाँ नम्बर प्राप्त गर्दछ तर तपाईं आफ्नो पुरानो नम्बरहरू प्रयोग गर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ:
तपाईंको पुरानो ल्यान्डलाइन फोन सेवामा कल
यदि तपाईं आफ्नो पुरानो फोन सेवा राख्नुहुन्छ भने, तपाईं आगमन कलहरू फर्काउन (कल फर्वार्ड) गर्न सक्नुहुनेछ ताकि जब कसैले तपाईंको पुरानो नम्बर कल गर्दछ, तपाईं जवाफ दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो क्याप्सनिंग भिडियोफोनमा। यो विशेष गरी पहिलो महिनाको लागि उपयोगी छ जब तपाईं आफ्ना साथीहरूलाई आफ्नो नयाँ नम्बर बताउँदै हुनुहुन्छ। वा तपाइँ अनिश्चित कालको लागि तपाइँको पुरानो नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ ताकि पुराना साथीहरू अझै तपाइँमा पुग्न सक्छन्।
तपाईंको क्याप्शन वीडियोफोनमा फर्वार्ड कलहरू क्याप्शन गरिएको छ।
केहि व्यक्तिहरु लाई तत्काल कल फर्वार्डिंग को उपयोग गर्न को लागी, ताकि पुरानो फोन पनि बज्न छैन। कल सीधा तपाईंको मा जान्छ Konnekt.
अष्ट्रेलियामा तपाईको घरको फोन तुरन्तै डाइभर्ट गर्नका लागि: ह्यान्डसेट उठाउनुहोस्, * २१ डायल गर्नुहोस् (तपाईंको क्याप्शन भिडियोिंग नम्बर) # र त्यसपछि ह्या hang् अप गर्नुहोस्।
अंकहरू बीच पज नगर्नुहोस्। (तपाईं माथिको अनुक्रम लेख्न मनपराउन सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईं पज नगरी डायल गर्न सक्नुहुनेछ)। यदि यो काम गर्दैन भने, पुन: प्रयास गर्नुहोस्।
केही व्यक्तिहरू आफ्नो पुरानो फोन नम्बरमा १० सेकेन्डको लागि पहिलो बज्न मन पराउँछन्। यदि तपाईं पहिले पुरानो फोनको घण्टी सुन्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई कलरलाई बुझाउने छ कि त्यहाँ एउटा नयाँ नम्बर छ जुन उनीहरूले सिधै कल गर्न सक्दछन्। पुरानो फोन फरक कोठामा छ भने यो पनि उपयोगी छ किनकि यदि तपाईं आफ्नो पुरानो फोनको नजीक हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई त्यहाँ आगमन कल आएको सुन्न सक्ने सम्भावना छ, र तपाईं आफ्नो क्याप्शनि Vide भिडियोमा उत्तर दिन हिड्न सक्नुहुन्छ।
अष्ट्रेलियामा तपाईको घरको फोन १० सेकेन्ड पछि बदल्न: ह्यान्डसेट उठाउनुहोस्, * dial१ डायल गर्नुहोस् (तपाईंको क्याप्शन भिडियोिंग नम्बर) * १० # र त्यसपछि ह्या hang्ग अप गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग धेरै पुरानो लिगेसी क्याप्शनि have फोन छ भने, तपाईंलाई अस्थायी रूपमा अर्को फोन प्लग इन गर्न आवश्यक पर्दछ तपाईंको फोन सकेटमा, किनकि # र * बटनहरूले कार्य नगर्न सक्दछन्।
वैकल्पिक रूपमा, तपाईंको फोन सेवा प्रदायकलाई तपाईंको लागि कल फर्वार्डिंग सेट अप गर्न सोध्नुहोस्।
तपाईंको मोबाइल फोन सेवामा कल
श्रवण क्षमताको साथ धेरै व्यक्तिसँग मोबाइल फोन छ जुन उनीहरूले टेक्स्ट गर्नको लागि प्रयोग गर्दछन्, वा फोन सन्देशहरू वा आपतकालीन कलहरूको लागि जब उनीहरू बाहिर हुन्छन् र बाहिर हुन्छन्।
यदि तपाईंसँग मोबाइल फोन छ भने, तपाईं कल फर्वार्डिंग सेट अप गर्न सक्नुहुनेछ ताकि जब कसैले तपाईंको मोबाईल फोन नम्बर कल गर्दछ, तपाईं कल तपाईंको उत्तर क्याप्शन वीडफोनमा कल गर्न सक्नुहुनेछ (क्याप्शनको साथ)।
एक मोबाइल फोन मा, तपाइँ धेरै तरिका मा कल फर्वार्डिंग सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ: तपाइँको फोन सेटिंग्स परिवर्तन गरेर, एक सक्रियता कोड डायल गरेर, एक नि: शुल्क कल-अग्रेषण अनुप्रयोग डाउनलोड गरेर, वा तपाइँको सेवा प्रदायक लाई तपाइँको लागी यो सेट अप गर्न को लागी।
हामी तपाईंलाई १० सेकेन्ड पछि कल फर्वार्डिंग सेट अप गर्न सल्लाह दिन्छौं। यसले तपाईंलाई तपाईंको मोबाईल फोन बोक्न वा लगाउन सक्षम गर्दछ र यसलाई सचेत उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्दछ। यो तपाईंको आवाज क्याप्शन भिडियो भिडियोमा बज्नु अघि, बज्नेछ र कम्पन हुनेछ, ताकि तपाईंलाई आगमन फोन कलको बारेमा सचेत गराइनेछ जहाँ तपाईं भए पनि। यदि तपाईंले यो गर्नुभयो भने, तपाईं सबैले आफ्नो मोबाईल फोन नम्बर कल गर्न चाहनुहुन्छ, र त्यसैले तपाईंले पनि:
सोध्नु Konnekt तपाईंको मोबाइल फोन नम्बर CLI को रूपमा प्रयोग गर्न (कलिंग लाइन आईडेन्टिफायर) तपाईंको लागि Konnekt फोन। व्यक्ति तपाईबाट फोन गर्नुहोस् Konnekt फोनले देख्नेछ कि तपाईले आफ्नो मोबाईल नम्बरबाट कल गर्नुभयो, र त्यसकारण तपाईलाई आफ्नो मोबाइल नम्बरमा कल गर्नेछ।
व्यक्तिलाई तपाईंको मोबाइल फोन नम्बर भन्नुहोस् तपाईंको क्याप्शन भिडियो भिडियो फोन नम्बरको सट्टा।
अर्को लाभ: तपाईले कुनै मोबाईल फोन कल गर्न तपाईको मोबाईल फोन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
अग्रेषित कल लागत छ?
फर्वार्ड गरिएको कलहरू तपाईको फोन सेवाबाट तपाईको फोन कलबाट घरेलू कलको रूपमा गणना गरिन्छ Konnekt फोन नम्बर। अष्ट्रेलिया र धेरै देशहरूमा, यदि तपाइँको ल्याण्डलाइन फोन योजना वा मोबाइल फोन योजनाले घरेलु ल्यान्डलाइन फोन नम्बरहरूमा असीमित कलहरू समावेश गर्दछ, तब फर्वार्ड कलहरू तपाइँको अवस्थित फोन योजनामा ​​समावेश हुनेछ र तपाइँलाई थप चार्ज गरिने छैन। यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न भने, तपाईंको फोन सेवा प्रदायकसँग कल-फर्वार्डि costs लागतहरू जाँच गर्नुहोस्।
Konnekt मद्दत गर्न सक्छ
Konnekt तपाईंलाई तपाईंको अन्य फोनहरू कसरी सेट अप गर्ने निर्णय गर्न मद्दत गर्न सक्दछ, उत्तम तपाईंको जीवनशैली र आवश्यकताहरू अनुरूप।
मानिसहरूले तपाईंलाई मोबाईलबाट र विदेशबाट पनि कल गर्न सक्दछन् जसरी स्थानीयहरूले तपाईंलाई बोलाउँदछन्:
स्काइपबाट, विश्वको लगभग कुनै पनि देशमा, तपाईंको साथीहरू र परिवारले तपाईंलाई आमने सामने कुरा गर्न सक्दछन्
व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि टेलिफोनबाट, मोबाईल फोन सहित, तपाईंलाई तपाईंको क्याप्शन वीडफोनको फोन नम्बरमा कल गर्न सकिन्छ। विदेशी कलरहरूले तपाईंको देश कोड प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ।
तपाईं अज्ञात कलरहरूको कल ब्लक गर्न चाहानुहुन्छ भनेर निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। केवल हामीलाई थाहा दिनुहोस्।
हो, यदि तपाईंसँग घर, काम, वा मोबाइल फोन सेवा छ भने। (तपाईं यस कारणका लागि नियमित घर फोन लाइन राख्न चाहानुहुन्छ)।
यसलाई steps चरणहरू चाहिन्छ:
Konnekt तपाईंको अर्को फोन नम्बरमा मिसिंग आउने कलहरू डाइभर्ट गर्न तपाईंको क्याप्शनिंग भिडियोफोन कन्फिगर गर्दछ (पछि, भन्नुहोस्, seconds० सेकेन्ड)।
तपाईंले भ्वाइसमेलमा आगमन कलहरू पठाउन तपाईंको अन्य फोन सेवा कन्फिगर गर्नुभयो (तुरुन्त वा पछि, भन्नुहोस्, -5-१० सेकेन्डको घण्टीमा)।
छुटेका कलहरू जाँच गर्न र पुन: प्राप्ति गर्न क्याप्सन भिडीफोनबाट तपाईंको भ्वाइसमेल पहुँच नम्बर कल गर्नुहोस् (एक छुवाइको साथ यस नम्बरमा कल गर्न भ्वाइसमेल वा सन्देश कल-बटन सेट अप गर्न सकिन्छ)। सन्देशहरू खेल्न अनस्क्रीन कीप्याड प्रयोग गर्नुहोस्। भ्वाइसमेल प्रम्प्ट गर्दछ र तपाईंको पुनःप्राप्त सन्देश क्याप्शन हुनेछ।
Konnekt टेलस्ट्र्रा मेसेजब्यान्क जस्ता लोकप्रिय भ्वाइसमेल सेवाहरूको लागि छिट्टै यहाँ विस्तृत निर्देशनहरू थप गर्दछ।
नोट: यदि स्वत: उत्तर सेट अप गरिएको छ भने: एक आगमन कल दुबै उत्तर दिन सकिदैन दुबै स्वचालित रूपमा क्याप्सन भिडियोफोनमा र अर्को फोनमा डाइभर्ट गरियो।
यो नयाँ सुरक्षा सुविधा हो।
अष्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, बेलायत, युरोप, र विश्वको अधिकांश भागहरूमा, रोबो कलहरू समस्या बनिरहेको छ। यी कम्प्युटरबाट स्वचालित अनावश्यक कलहरू हुन्। लगभग सबै केसहरूमा कलरको संस्थाले तपाईंलाई केहि बेच्न कोशिस गर्दछ, जस्तै बीमा उत्पादनहरू, जुवा सेवाहरू, डेटि sites साइटहरू, वा राजनीतिक रूपले प्रेरित समूहको सदस्यता। केहि अवस्थाहरूमा, कलरले तपाईंलाई अवैध वा अनावश्यक उद्देश्यहरूको लागि व्यक्तिगत जानकारी प्रकट गर्न छल गर्दछ।
यी अनावश्यक कलहरू विरुद्ध तपाईंको रक्षा गर्न मद्दतको लागि, तपाईंको कलरलाई कहिलेकाँही उनीहरूको फोन कीप्याडमा एक अंक प्रविष्ट गर्न प्रेरित गरिनेछ, तपाईंको भिडियोफोन घण्टी बजाउनु अघि। अंक भिन्न हुनेछ (कहिलेकाँही यो be हुनेछ, कहिलेकाँही यो be हुनेछ)। यसले गैर-मानव कलरहरू रोक्न मद्दत गर्दछ।
यो केवल तपाईंको क्याप्सन भिडीफोनको फोन नम्बरमा नियमित फोन कलहरूको लागि हुन्छ। यो स्काईप (आमनेसामने) कलहरूको लागि देखा पर्दैन।
यसमा बिल्कुल कुनै प्रभाव छैन Konnekt प्रयोगकर्ता को Konnekt उपकरण बज्नेछ, सामान्य रूपमा, र Konnekt प्रयोगकर्तालाई थाहा छैन कि उनीहरूको कलर जाँच गरिएको छ।
कसरी कल प्राप्त गर्ने
तिनीहरूले तपाईंलाई बोलाउछन्: अर्को व्यक्ति या त तपाईंको नम्बर कल गर्दछ, वा तपाईंलाई स्काईपमा कल गर्दछ
नाम: तिनीहरूको नम्बर देखाइएको छ, वा नाम यदि यो सम्पर्क हो भने
यो बज्यो ठूलो स्वरले, र सम्पूर्ण स्क्रीन फ्ल्यास हुन्छ
एक स्पर्श: प्रेस ANSWER - वा नामित कलरहरुलाई स्वतः उत्तर दिन सकिन्छ (वैकल्पिक)
वाच: यदि उनीहरू स्काईप प्रयोग गर्छन् भने, उनीहरूको अनुहार हेर्नुहोस् र ओठहरू पढ्नुहोस्
के क्याप्शन कलहरू निजी छन्?
क्याप्शन कसरी सच्याइन्छ?
क्याप्शन कति ठूला छन्?
के म क्याप्शनहरू समीक्षा गर्न सक्छु?
कुन भाषाहरू समर्थित छन्?
हो। कुनै मानव अपरेटर वा क्याप्शन एजेन्टहरू संलग्न छैनन्।
कलहरू र क्याप्शन पाठ इन्टरनेट प्रसारणको बखत ईन्क्रिप्ट गरिएको छ।
अन्तरिम पाठ: वाक्य पूरा हुनु अघि शब्दहरू प्रदर्शन हुन्छन्। भ्वाईस र टेक्स्ट बिचको अन्तराल १. seconds सेकेन्ड भन्दा कम छ, मानव-सहायक क्याप्शनको लागि कम्तिमा -1.5--3 सेकेन्डको तुलनामा।
अन्तिम पाठ: वाक्यांश वा वाक्यको अन्त्यमा, सम्पूर्ण वाक्य विभाजित सेकेन्ड भित्र सुधार हुन्छ। कुनै मानव यो मेल गर्न सक्दैन।
ठूलो क्याप्शन विन्डो: क्याप्शनहरू ठूला १-इन्च स्क्रीनमा प्रदर्शित हुन्छन्, जसको आईप्याड / ट्याब्लेटको क्षेत्रफल दुई पटक छ।
समायोज्य पाठ आकार: एउटा सानो पाठ आकार, जस्तै १२-पोइन्ट, अधिक पाठ प्रदर्शित गर्दछ। ठूलो पाठ आकार, जस्तै २००-पोइन्ट, पढ्न सजिलो छ। पूर्वनिर्धारित (-12-पोइन्ट) पनि हामीले देखेका विकल्पहरू भन्दा ठूलो छ।
हो। कलको बखत वा पछाडि, तपाइँ क्याप्शनहरू समीक्षा गर्न पुन: स्क्रोल गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंलाई प्रत्येक कल पछि क्याप्शन पढ्न समाप्त गर्न बढी समय चाहिन्छ भने, अवधि बढाउन सकिन्छ।
आज क्याप्शनका लागि अ language्ग्रेजी भाषा समर्थित छ। हामी चाँडै नै अन्य भाषाहरू, जस्तै जर्मन, स्पेनिश, फ्रेन्च, इटालियन, जापानी, पोर्तुगेज, रूसी, चीनियाँ र अधिक थप्नेछौं।
प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस आफैं (कल बटन सहित) व्यावहारिक कुनै भाषामा उपलब्ध छ। मात्र सोध्नुहोस्।
क्याप्शनले कसरी काम गर्दछ?
यो Konnekt क्याप्शन भिडियो भिडियोले कृत्रिम बुद्धिमताद्वारा संचालित सन्दर्भ-सम्वेदनशील क्याप्शन प्रयोग गर्दछ।
बाह्य उपकरण र सहायक उपकरण
के यो आपतकालीन बटनको साथ काम गर्दछ?
के यो मोबाइल फोनको साथ काम गर्दछ?
के यो फेसटाइम, व्हाट्सएप, लाइन, फेसबुक मेसेन्जर, गुगल डुओ / ह्या Hangouts्गआउट्स, भाइबर ... को साथ काम गर्दछ?
के यो मेरो ब्लुटुथ हेडसेट / ब्लूटूथ श्रवण सहायता एम्पलीफर को साथ काम गर्दछ?
के यो मेरो रोजा पेनको साथ काम गर्दछ?
के कसैले बज्दछ जब यो अर्को कोठामा बत्ती जलाउन सक्छ?
क्याप्सन भिडियोफोन कुनै पनि व्यक्तिगत अलार्म, आपतकालीन बटन, पेंडन्ट वा ब्रेसलेटबाट स्वतन्त्र हुन्छ।
Konnekt एक अशक्तता भएको कसैको लागि वायरलेस पहुँच बटन आपूर्ति गर्न सक्दछ, यदि त्यहाँ उत्तर दिन वा दूरबाट कलहरू सुरू गर्न आवश्यक छ भने।
वैकल्पिक स्वत: उत्तर सुविधा आपतकालको समयमा सहयोगी हुन सक्छ।
क्याप्शन भिडियो भिडियो तपाईंको मोबाइल फोनबाट स्वतन्त्र छ।
तपाईं आउने मोबाइल फोन कलहरूलाई तपाईंको क्याप्शन वीडियफोनको नम्बरमा डाइभर्ट गर्न सक्नुहुनेछ, ताकि तपाईं आफ्नो कलमा जवाफ दिन सक्नुहुनेछ। Konnekt क्याप्शनको साथ।
यो तपाईंको मोबाइल नम्बरमा भिडियोफोनको कलिंग लाइन आईडी सेट गर्न पनि सम्भव छ। सम्पर्क Konnekt.
यदि तपाईंलाई थाहा छ कसरी तपाईंको मोबाईल फोनबाट 3-वे कलहरू सेट अप गर्ने, र तपाईं फोन कल गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईंको मोबाईल कलि plan्ग प्लानमा हो तर तपाईंको भित्रमा होईन। Konnekt कलिंग योजना (उदाहरणका लागि, विदेशी / मोबाइल नम्बर):
तपाईको मोबाईलबाट: क्याप्सन भिडीफोन फोन नम्बर कल गर्नुहोस्। उत्तर तपाईंको मोबाइलमा: कल होल्डमा राख्नुहोस्।
तपाईको मोबाईलबाट: तपाईले कल गर्न चाहानुभएको नम्बरमा कल गर्नुहोस्। जब यो उत्तर दिन्छ, दुई कलहरू मर्ज गर्नुहोस्। तपाईंको मोबाइल म्युटमा राख्नुहोस् (माइक्रोफोन र स्पिकर)।
तपाईंको क्याप्शन भिडियो भिडियोमा उनीहरूसँग कुरा गर्नुहोस् - क्याप्शनको साथ!
क्याप्शन भिडियो भिडियोले स्काईप प्रयोग गर्दछ र स्काईप प्रयोगकर्ताहरू, साथ साथै नियमित फोनहरूसँग जडान गर्न सक्दछ।
अन्य सेवाहरूका प्रयोगकर्ताहरू जडान गर्न सक्दछन् यदि तिनीहरू क्याप्शनि Vide भिडियोफोनको फोन नम्बर कल गर्न सक्षम छन्।
क्याप्सन भिडियोफोनले अझै ब्लुटुथ सामानहरू समर्थन गर्दैन।
जे होस्, भिडिओफोनसँग नियमित 3.5.mm मीमीको माइक्रोफोन र ध्वनी सकेटहरू छन् जुन अरू धेरै अडियो उपकरणहरूसँग जडान गर्न सकिन्छ, जस्तै बाह्य स्पिकरहरू, बाह्य माइक्रोफोनहरू, पीसी हेडफोनहरू र हेडसेटहरू, र सहायक उपकरणहरू र कोक्लियर इम्प्लान्ट्स सुन्नका लागि कनेक्टिविटी उपकरणहरू।
भिडियोफोनले धेरै जसो USB ह्यान्डसेटहरू र हेडसेटहरू - सम्पर्कलाई पनि समर्थन गर्दछ Konnekt.
हो, तपाईं आफ्नो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ फोनाक रोजर पेन तपाईंको क्याप्शनि Vide भिडियोफोन सुन्न, तपाईंको श्रवण शक्ति वा कोक्लियर इम्प्लान्ट मार्फत, दुई तरिका:
अडियो युग्मन: क्याप्सन भिडिओफोनको स्पिकरहरू मध्ये एकको नजिक तपाईंको रोजर पेन राख्नुहोस् (तल बायाँ वा तल दायाँ)।
यदि तपाईं बाह्य स्पिकर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको रोजर पेन बाह्य स्पिकरको नजिक राख्नुहोस् र बाह्य स्पिकरको भोल्युम कम सेटिंगमा समायोजित गर्नुहोस्।
रोजर पेनको आन्तरिक माइक्रोफोनले ध्वनि लिन्छ र यसलाई तपाईंको श्रवण सहायता वा कोक्लियर इम्प्लान्टमा पठाउँदछ।
वायर्ड: तपाईंको रोजर पेनको साथ आएको अडियो केबल प्रयोग गर्नुहोस्। पहिले, केबलको 3.5.mm एमएम प्लग the.mm एमएम ध्वनि-आउटपुट सकेटमा क्याप्शनिंग भिडियोफोनको आधारमा जडान गर्नुहोस्। (बाँकी-सबैभन्दा सकेटको प्रयोग गर्न निश्चित गर्नुहोस्, छेउको नजिकको। यदि तपाईं दोस्रो 3.5.mm एमएम सकेट प्रयोग गर्नुहुन्छ, जुन साउन्ड-इनपुट सकेट हो, तपाईं एक अर्कालाई सुन्न सक्षम हुनुहुने छैन)।
अर्को, अडियो केबलको अर्को छेउमा जडान गर्नुहोस् (फ्ल्याट माइक्रो-यूएसबी प्लग) तपाईंको रोजर पेनमा।
यदि तपाईं बाह्य स्पिकर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, जाँच गर्नुहोस् कि बाह्य स्पिकरले तपाईंको आफ्नै mm.mm एमएम अडियो आउटपुट सकेट समावेश गर्दछ तपाईंको रोजर पेनमा जडान गर्न; यदि होईन भने, तपाईंले बाह्य स्पिकर बिच्छेदन गर्न आवश्यक पर्दछ।
रोजर पेनले केबलको माध्यमबाट आवाज लिनेछ र तपाइँको श्रवण सहायता वा कोक्लियर इम्प्लान्टमा पठाउँनेछ।
यदि तपाईं आफ्नो रोजर पेनको साथ आएको अडियो केबल हराउदै हुनुहुन्छ भने, तपाईं तपाईंको अडियोलोजिस्ट वा अनलाइनबाट प्रतिस्थापन केबल खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। फोनक भाग नम्बर खोज्नुहोस्। ०043-3085 ((पहिले ०043--3066।) वा बराबर।
तपाईंको रोजर पेनमा ब्लुटुथ इनपुट अझै समर्थित छैन।
क्याप्शनिंग भिडियोफोनलाई स्मार्ट प्लगहरू र स्मार्ट प्रकाशको लागि इन्टरफेस गर्न सकिन्छ। यसको लागि अतिरिक्त सामान र प्राविधिक सेटअप आवश्यक छ। यो अझै मानक छैन Konnekt उत्पाद सुविधा। यदि माग छ भने, यो एक विकल्पको रूपमा उपलब्ध हुनेछ।
यस्ले कसरी काम गर्छ? यदि तपाइँ अर्को कोठामा हुनुहुन्छ जब तपाइँको क्याप्सनि Vide भिडियोफोन बज्छ, तपाइँले बत्ती बत्ती देख्नुहुनेछ (वा फ्ल्यास अन र अफ)। यसले छुटेका कलहरू रोक्न मद्दत गर्दछ।
भिडियो पृष्ठ मुख्य पृष्ठ क्याप्शन
मलाई क्लिक गर्नुहोस्